Home Local News “Mugabe helped create MDC” – Douglas Mahiya says
“Mugabe helped create MDC” – Douglas Mahiya says
President Mugabe has no moral authority to lecture people on how bad the MDC-T and its leader Morgan Tsvangirai are because he helped establish the opposition party, a war veterans leader has said.
The Zimbabwe National Liberation War Veterans Association spokesperson Douglas Mahiya said Mugabe forced Tsvangirai, then secretary general of the Zimbabwe Congress of Trade Unions, out of Zanu PF before challenging the trade unionist to a political fight.
“Tsvangirai was Zanu PF and was, as has happened with many others including war veterans, forced out of the party. Mugabe in the late 90s also challenged Tsvangirai to a political fight and personally asked him to form a party,” Mahiya told Newzimbabwe.
President Mugabe and Morgan Tsvangirai
The military was also roped in with the generals, in 2202, issuing a chilling statement now infamously called the “straight-jacket” declaration in which they warned that only those who had fought in the liberation struggle had a right to rule Zimbabwe.
Previous articleBATTLE LINES DRAWN BETWEEN GOVT & WAR VETS LEADER Mutsvangwa
Next articleHarare Man Edson Munatsi goes on Hunger Strike, vows not to eat until Mugabe RESIGNS